DHAQDHAQAAQYADA DADWEYNAHA EE BOODADA BISADAHA: SAABUUN, GEEDO IYO KUWO KALE, SIDA GURIGA LOO GEEYO - GURI, GURI
"Hooyo ayaa ku yiri labo!" Dhaqdhaqaaqyada dadweynaha ee boodada ee bisadaha: sida loo keeno saabuunta guriga iyo kuwa kale
Muuqaalka koowaad ee baaskiilka ayaa ah dhacdo caadi ah. Ma aha jidka kaliya iyo xayawaanka guri la'aanta ah, laakiin sidoo kale xayawaanka nadiifka ah waxay ku xiran yihiin weerarka dhiigga yar yar.
Xaqiiqdu waxay tahay in boodada si sahlan u heli karaan qolka laga bilaabo gelitaanka aan aad u nadiif ah, "ka imow" waddada dharka ama kabaha dadka deggan, "ka boodi" deriska.
Dhawaaqida kudhaca duleedyada ayaa ah mid halis ah oo aan ahayn kaliya xayawaanka dhogorta ah, laakiin sidoo kale dadka, sida boodada waa sidayaal cudurro halis ah: cagaarshow, salmonellosis, tafaasiil.
On jirka ee bisad caadi ahaan kaliya boqolkiiba 5 kaliya ee shaybaarka, inta kale ee foomka of ukun la dhigay, pupae, dirxiga si degdeg ah ku noolaan guriga oo dhan. Taasi waa sababta dagaalka lagula jiro ciidamada bada, tallaabooyin adag oo waxtar leh, oo ay ku jiraan daaweynta ciribtirka ee ma aha oo kaliya xayawaankaaga, laakiin sidoo kale dhammaan guryaha.
Calaamadaha ah boodada ee bisadaha guryaha
Calaamadaha soo socda ayaa kaa caawin doona in la go'aamiyo in xayawaanku ka walwalsan yahay boodada, oo aan cudur ahayn:
pruritus. Xayawaanka saboolka ahi wuxuu bilaabmayaa inuu isku dhajiyo dhabarka iyo dhinacyada. Ticks waxay badanaa saameeyaan meelaha dhegta iyo gumaarka;
joogitaanka alaabada qashinka ah. Waxaad arki kartaa baaxada iyo ukunta ukunta, oo u eg sida isku dar ah mugdi cad iyo mugdi ah, adigoo u kala jiidaya timaha bisadaha;
boodada dadka waaweyn. Uumiyeyaashu waxay si firfircoon u bilaabayaan inay ka soo cararaan jirka xayawaanka ah inta lagu jiro dhaqidda ama combsaanka, ka dibna waa la arki karaa;
nabarrada, boogaha, casaan maqaarka. Dufcadu waxay qaniinaysaa maqaarka maqaarka, iyo isku-daba-marinta natiijooyinka dhaawacyada kala duwan.
Daaweyntu waa inay bilaabataa ugu yaraan hal calaamadaha kor ku xusan. Kadib, boodada fool-xun waxay sababi kartaa dhibaatooyin caafimaad oo daran oo loogu talogalay xayawaankaaga:
xanuunka habdhiska dareenka.
Hababka dhaqameed ee wax ka qabashada boodada ee bisadaha
Waxay u egtahay in awoowayaasheenu ay ogaadeen waxyaabo ay ka mid yihiin boodboodka ama dhibcaha. Nidaamkooda badbaadinta xayawaanka nasiib darrada ah waxay ahaayeen kuwo fudud laakiin waxtar leh.
Si ka duwan noocyada cayayaanka, kuwaas oo kaliya ma burburin karo dulinyada, laakiin sidoo kale waxay keeni karaan waxyeelo weyn oo ku ah xayawaanka iyo dhammaan dadka deggan guryaha (sababtoo ah dabiiciga kiimikada) Dumarka 'kalluumeyaha' waxay kuxirnaanayaan daacadnimo badanaa ficil ahaanna waa ficil.
Hase yeeshee oo awood u leh inay si xun u burburiyaan nolosha walaalkii boodada ah.
MUHIIM! Xakamaynta kuma noolaan xayawaanka xayawaanka mar walba, waxay u boodaan waqti, iyagoo raadinaya cunto. Laakiin waxay ku nool yihiin meel u dhow, oo ku saabsan shayada isticmaalka xayawaanka. Sidaa darteed, si ay u burburiyaan dulinyada, marka hore, meel kasta oo la seexdo, barkada, barkada, joodariga), iyo sidoo kale guriga (haddii ay mid tahay) iyo suxuunta cuntada iyo cabitaanka waa in si taxaddar leh looga shaqeeyaa. Sameynta guriga iyo dambiilaha ayaa la samayn karaa iyada oo kuleylka kulul, alaabada ka samaysan maro waa in lagu dhaqaa biyo karkaraya saabuun leh, suxuunta maydhay soodhada.
Siyaabaha ugu waxtar badan ee lagula dagaallami karo bada:
geedo ur leh. Tansy, dixiriggu wuxuu leeyahay ur ah qaas ah oo gaar ah, gabi ahaanba aan loo adkaysan karin boodada. Bustayaasha yaryar ee cawska qallalan ee la dhigo meelo kala duwan ee aqalka ah waxay cabsi galin doonaan dhiig-baxayaasha muddo dheer. Waad ku tirtiri kartaa timaha xayawaanka ka dib marka aad ku maydho adegyo qadhaadh ah; ma jirto baahi loo qabo in laga baqdo: dixiriggu waa dhib aan loo baahnayn xayawaanka;
isku-darka. Nidaamkan, waxaad u baahan doontaa shanlo leh ilko isdaba joog ah. Habkani waxaa badanaa loo isticmaalaa kittens yar yar, laakiin ma dammaanad qaadi karto boqolkiiba boqol boqolkiiba dulin;
dhoobada geed. Xiniinyaha si adag u dulqaata urta ciriiriga ah waxayna u muuqataa in ay ka fogaadaan ilkeeda. Si looga hortago muuqaalka cayayaanka iyo ka hortagga dhalmo ee kuwa jira, qashinka xayawaanka waxaa ka buuxsamay balka cusbada yar. Waxaad sidoo kale balaadhin kartaa bacaha yaryar oo leh wakiilkan cabudhsanaya guriga oo dhan;
qabow. Dhalinyaradu waa thermophilic, sidaas darteed hoos u dhig heerkulka ayaa burburinaya iyaga. Si aad u nadiifiso hoygaaga qoyaanka dhibka leh, waa ku filan inaad ka tagto dariishadaha oo dhan qolka furan saacado yar kadib, ka dibna ka saaro dhammaan dadka deggan. Cunto waqtigaan ayaa laga soo qaadi karaa waddada "oo lagu maydho" meel biyo ah oo qoto dheer leh;
isku dar ah cusbada iyo baking soda. Waxay waxyeello u geysataa shaybaarka qaangaarka ee dadka waaweyn. Powder waxay u baahan tahay in ay ku shubaan karbuunada guriga, iyo sidoo kale qashinka bisadaha. Dhowr saacadood ka dib, fuuq bax. Ka takhalusidda boodada ayaa kaa caawin doonta iyo walbahaaga (laga bilaabo saamiga galaas cusbo ah on baaldi cabitaan). Si taxaddar leh, xayawaanka ku adkee xayawaanka, ku rid baaldi, adigoo madaxa ka saaraya kaliya dusha sare. Xaaladdan, waxaad u baahan tahay inaad xayawaanka ku hayso 2-3 daqiiqo (haddii aad awoodid), ka dibna ku tirtir biyo diirran oo nadiif ah;
saabuunta. Waxaa la yaqaan tan iyo wakhtiyadii hore ee hantida faa'iido leh. Xayawaanku wuxuu daaweynayaa dhaawacyada maqaarka, cambaarta, dermatitis, kiniiniyada, suuxdinta, dila bakteeriyada faafa ee kala duwan, waxay leedahay saameyn aan khasaare ahayn oo kaliya cayayaanka dadka waaweyn, laakiin sidoo kale faracooda (ukunta, dirxiga). Intaa waxaa dheer, habka saabuunta ee dabiiciga ah waa mid dabiici ah mana dhaawici doono wax dhib ah saaxiibkaaga dhogorta leh. Sidee loo fuliyaa xayawaanka? Saabuunta ayaa lagu garaacaa xumbo xoog leh waxayna xayiraan xayawaan, 5 daqiiqo ka dib, maydh. Waa habboon in la sameeyo habraaca 3-4 maalmood ilaa dhamaadka dhamaystiran ee dhiiga boodada;
WARBIXIN! Saabbinta taranka si loo baabiiyo boodhka waxaa loo isticmaali karaa yar yar (2-bilood jir) kittens. Waa wax aan waxba tarayn.
qandho (dalmatian chamomile). Ubaxyada geedkan beerta quruxda badan leh waxaa ku jira sunta sunta dabiiciga ah ee khatarta ah. Si aad uga takhalustid xayawaanka dulinka, waxaa lagama maarmaan ah in lagu maydho decoction ee inflorescences qalalan ee pyrethrum (hal koob oo cawska la jajabiyey halkii 5 litir oo biyo ah karkaraya);
MUHIIM! Waa in la xusuusto in bisad, ka dib marka la qubaysto, ay u baahan tahay in si dhaqso ah loo qalajiyo, xitaa xagaaga, maadaama ay qabow qabaan si fudud oo ay "qabtaan" kelyo ama cudur kaadi heysta.
ammonia, 3% sirko iyo cologne ubaxa. Tani waa qaab bedelaad ah oo ah in boodada laga soo qaado jaakadda xayawaanka, laakiin waa mid waxtar leh. Dhammaan waxyaalaha maaddada loo baahan yahay waa in la qaataa qaybo siman, qaso, ku shub dhalada buufinta oo buufin timaha timaha. Ka dib markaa, ku xay xayawaanka bac caag ah, oo kaliya madaxa ka baxsan. Dhamaantood waxay isku dayaan in ay xayawaanka ku hayaan 5-10 daqiiqo, ka dibna ku dhaq biyo kulul. Cayayaanka ku dhinta biyaha ayaa hoos u dhiga musqusha;
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan hababka iyo hababka kale ee wax looga qabto boodada bisadaha waxaa laga heli karaa boggayaga internetka: shaambo, silsilado, dhibcooyin, xoojin, Udoodeeye, Faa'idada, Kormeeraha, Frontline, Leopard, Celandine. Sidoo kale ku saabsan hababka iyo hababka caruurta.
Dhammaan falalka ku saabsan burburinta boodada xayawaanka rabaayada ah waa in la sameeyaa iyadoo la raacayo habka guriga, haddii kale dhawr maalmood ayaa xayawaankaagu mar kale isku jeexi doonaa faruuryadiisa, isagoo isku dayaya inuu xakameeyo cayayaanka nacaybka ka baxay furihiisa.